त्यो १७ हजारको भाग बादल, लेखराज भट्ट या टोपबहादुरको नाममा लाग्दैन ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
त्यो १७ हजारको भाग बादल, लेखराज भट्ट या टोपबहादुरको नाममा लाग्दैन ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २१ पुष मंगलवार १७:३३
ओली-थरी नेकपाका कार्यकर्ताले प्रचण्ड पक्षलाई फेरि बाँदरमुडेदेखि १७ हजारसम्म प्रश्न उठाएका छन् ! यो त लासमाथि घृणित र निकृष्ट राजनीति मात्रै भयो । -के यी घटना पार्टी एकीकरण गरेपछि घटेका हुन् ? -प्रचण्ड अपराधी हुन् भने यो जान्दाजान्दै तिनलाई महान् अध्यक्ष बनाउनेहरू अपराधी होइनन् ?
-हिजो भर्खर ऐतिहासिक र महान् क्रान्तिकारी एकीकरण भनेको होइन? -मतपत्र च्यात्नु अपराध थियो भने तिनैलाई कामरेड भन्दै जिल्ला कमिटीमा किन ल्याएको ? -त्यो १७ हजारको भाग बादल, लेखराज भट्ट या टोप बहादुर रायमाझीको नाममा पनि लाग्दैन ?
-सर्वोच्चले हत्यारा भनेर जेल नै हालेका बालकृष्ण ढुङ्गेलको गलामा ओलीको तस्बीर झुन्डिने बित्तिकै ती क्रान्तिकारी भए ?
बाँदरमुडेको तस्बीर बेचेर तुच्छ राजनीति गर्नु आफैमा अपराध हो । यो पीड़ितलाई न्याय दिलाउन होइन, आफ्नो गुटप्रति सहानुभूति बटुलेर माथि जानका लागि खेलिएको काइते खेल हो । यो पीड़ितको मनोभावनामाथि अर्को शोषण हो ! कम्तिमा हिजो छोरीका लागि भोट माग्न चितवन झरेका देउबा र प्रचण्डसँग दुबोको माला साटेर मीत लगाएका ओली ग्याङ्सँग यो नैतिकता छैन । भ्रममा नपरौं । भोलि कुनै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रले एकै ठाउँ ल्याइदियो भने तिनैले फेरि युगपुरुष प्रचण्ड भनेर जयकार गर्नेछन्, गरेकै हुन् !